महाअष्टमीमा बलि : किन, कहाँ र केका लागि ?
काठमाडौं । हिन्दूहरुको महान् पर्व मानिने दशैँका बेला देशैभरिका मन्दिर र शक्तिपीठहरुमा बलि दिने प्रचलन रहेको छ । उसो त बलि दशैँका बेला मात्र दिइँदैन, अन्य पर्व उत्सव र धार्मिक एवं तान्त्रिक कार्यसिद्धिका लागि पनि पशुबलि दिइँदै आएको पाइन्छ ।
आज नवरात्रिको आठौँ दिन अर्थात् महाअष्टमी तिथिमा सबैभन्दा बढी बलि दिने गरिन्छ । महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाआजा एवं अनुस्ठान गरिने आजको दिन भगवती मन्दिरहरु तथा शक्तिपीठहरुमा राँगा, बोका, हाँस, कुखुरालगायतका पशुपंक्षीको ठूलो मात्रामा बलि दिने गरिएको छ ।
आखिर बलि किन दिइन्छ त ? यसबारे विभिन्न विचार–विमर्श र बहस भएका छन् । महाअष्टमीको दिन शास्त्रसम्मत रूपमा दशैँघर, कोतलगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गाको विशेष पूजाआजा गरिनाले सुख–समृद्धि र मुक्ति पाइने जनविश्वास रहेको छ ।
तीन प्रकारका बलि
देवी मन्दिर एवं शक्तिपीठहरुमा पशु बलि दिइन्छ र खासमा बलि शब्दले प्राणीको बलिदान दिइनुलाई नै जनाउँछ । तर बलिका मुख्य ३ प्रकार रहेको यसबारे जानकारहरु बताउँछन् । ती हुन्( सात्विक, राजस र तामस बलि ।
चन्दन, अक्षता, फूल, अघ्र्य, पञ्चामृत र पायस लगायत १६ सामग्रीले पूजा गर्ने विधिलाई सात्विक भनिन्छ । यसलाई षोडषोपचार पूजा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ ।
पशु तथा पंक्षीको रगत, मासु चढाएर देवीदेवतालाई सन्तुष्ट गराउने विधिलाई राजस बलि भनिन्छ । यसमा सात्विक पूजाका साथै पशुबलि अर्थात् रगत चढाउनु अनिवार्य मानिन्छ ।
सात्विक र राजस दुवै विधिसहित मदिरा समेत चढाएर गरिने पूजा विधिलाई तामस भनिन्छ । यी कुरा शास्त्रमा नै परिभाषित गरिएकाले पशुबलि शास्त्रसम्मत नै रहेको एकथरी विद्वानहरु तर्क गर्छन् । काठमाडौँस्थित प्रसिद्ध गुह्येश्वरी मन्दिरमा यही तामस विधिबाट बलि दिने परम्परा छ । अन्य शक्तिपीठहरुमा भने राजस बलि दिइन्छ ।
मुक्तिका लागि बलि
देवीदेउताका मन्दिर र यज्ञयज्ञादिमा विधिपूर्वक दिइने बलि मुक्तिसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। विवेकशील र अविवेकशील प्राणी दुवैले मोक्षप्राप्तिको चाहना गर्ने हुनाले पवित्र स्थल तथा शक्तिपीठहरुमा पशुपंक्षीको बलिदान दिएर उनीहरुको मोक्षमार्ग सुरक्षित गर्नकै लागि बलि दिइने गरेको शास्त्रीय मत राख्नेहरुको तर्क हुन्छ ।
यसरी देवीका खातिर बलिदान चढ्ने पशुले अर्को जन्ममा माथिल्लो जुनी लिएर जन्मने शास्त्रमा वर्णन गरिएको बताइन्छ । यद्यपि, यस मतको धेरैले खण्डन पनि गर्ने गरेका छन् ।
पशुबलि दुर्गापक्षमा देवी स्थापना गरिएको स्थानमा विधिपूर्वक पशुमुक्तिका लागि भनेर सङ्कल्प र प्रार्थना गरी दिइने शास्त्रीय तान्त्रिक विधिका जानकारहरुको मत छ । आसुरी प्रवृत्तिको नाश गर्न देवीलाई शक्तिशाली बनाई पशुको मुक्तिका लागि पनि पशुबलिको महत्व रहेको बताइन्छ । अहिले नेपालमा चलेको तन्त्र र वैदिक मिश्रित विधि भएकाले शक्तिपीठमा बलि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै प्रबल रहेको देखिन्छ ।
राज्यको सुरक्षाका लागि समेत क्षेत्रीयमार्फत अनिवार्य बलि दिनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । तर ब्राह्मणको हातबाट भने पशुबलि दिन वर्जित गरिएको छ । राज्य सञ्चालकले प्रभु शक्ति, मन्त्र शक्ति र उत्साह शक्तिका लागि पशुबलि विधिपूर्वक दिनैपर्ने शास्त्रीय मत रहेको छ ।
कहाँकहाँ दिइन्छ बलि ?
महाअष्टिमीका दिन विशेषगरी देशैभरिका साना ठूला शक्तिपीठ तथा कुल देवता थानमा बलि दिने गरिन्छ । कतिपयले त घरमै पनि बोका तथा कुखुरा काटेर बलि दिन्छन् । १२ वर्षमा लाग्ने बाराको गढीमाई मेला बलिका लागि सबैभन्दा प्रख्यात मानिन्छ, जहाँ २० हजारभन्दा बढी पशुपंक्षीको बलि दिने गरिन्छ ।
मुख्यतयाः काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका शक्तिपीठहरु भद्रकाली, नक्साल भगवती, गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, कालिकास्थान, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इन्द्रायणी, सङ्कटा, बज्रबाराही, दक्षिणकाली, चामुण्डा, सुन्दरीमाई, रक्तकाली, बज्रयोगिनीलगायत मन्दिरहरुमा बलि दिने गरिन्छ । दशैँका नवरात्रभर यहाँ पूजा आराधना गर्ने भक्तालुको भीड नै लाग्ने गर्छ ।
सर्वसाधारणले मात्रै हैन राज्यले नै समेत बलि दिने चलन छ । हनुमानढोकाको दशैँघर, तलेजु भवनीमा महाअष्टमीका दिन राज्यका तर्फबाट ५४ बोका र ५४ राँगाको बलिसहित कालरात्रि पूजा गर्ने चलन अझै पनि छ । नेपाली सेनाले समेत हातहतियारको पूजा गर्दै विभिन्न शक्तिपीठमा मौलोपूजा बलि दिने चलन छ ।
देशका अन्य विभिन्न जिल्लाका प्रसिद्ध शक्तिपीठहरुमध्ये सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, धनुषाको राजदेवी, डडेल्धुराको उग्रतारा, बैतडीको देहीमाडौँ एवं निंगलाशैनी भगवती, तल्लादेही, काभ्रेपलाञ्चोकका चण्डेश्वरी, नाला भगवती र पलाञ्चोक भगवती, नुवाकोटको देवीघाट र भैरवी, गोरखाको मनकामना, पर्साको गहवामाई, सिन्धुपाल्चोकको पाल्चोक भगवती, दोलखाको कालिञ्चोक भगवतीलगायत शक्तिपीठमा पनि बलिसहित पूजा गरिन्छ।